Feesbuukin fuula sobaa maqaa Faanaa Broodkaastiingi Koorporeetin banaman cufe – Fana Broadcasting Corporate
Feesbuukin fuula sobaa maqaa Faanaa Broodkaastiingi Koorporeetin banaman cufe
Finfinnee, Sadaasa 11,2011(FBC)-Feesbuukin fuula sobaa maqaa Faanaa Broodkaastiingi Koorporeetin banaman 20 ol cufe.
Faanaa Broodkaastiingi Koorporeet fuula sobaa maqaa dhaabbatichaa, suura fi odeeffannoowwan fuula feesbuukii dhaabbatichaa isa sirrii irratti maxxanfamu fudhatanii maxxansuun hordoftoota dogongorsiisaa turuu ibseera.
Tokkoon tokkoon isaanii hordoftoota kuma 10 hanga kuma 45 kan horatan yoo ta’u, odeeffannowwan sobaa maxxansuun burjaajjii umaa turaniiru.
Dhaabbatichi fuula feesbuukii sobaa maqaa isaatin banaman kanaan booda hordofuun kan cufsiisu ta’uu beeksiseera.
Miidiyaan hawaasaa feesbuukii dhaabbatichaa dhaabbata feesbuukin beekkamtiin kennameef Afaan Amaaran kan hojjetu hordoftoota miliyoona 1.2 ol qabu /https://www.facebook.com/fanabroadcasting/፣ Afaan Oromoon hordoftoota kuma 211 ol qabu /https://www.facebook.com/afanoromofana/ fi Afaan Tigriffaa hordoftoota kuma 33 ol qabu /https://www.facebook.com/tigrignafana/ fuula feesbuukii dhaabbatichaa ta’uu hubatamuu qaba.
fuula feesbuukii sobaa maqaa Faanaa Broodkaastiingi Koorporeetin banamanii dhaabbanni feesbuukii cufe kan armaan gadiiti;
Fana Tv Hd/fbc ፋና ቲቪ